IceCure Medical yakapinda muchibvumirano chekutanga chekugovera neMobile SCANMED Systems SP. z oo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » IceCure Medical yakapinda muchibvumirano chekutanga chekugovera neMobile SCANMED Systems SP. z oo
IceCure Medical Ltd., inovandudza yechizvarwa chinotevera zvishoma zvinokanganisa tekinoroji tekinoroji iyo inoparadza mamota nekugwamba, nhasi yazivisa kuti yapinda muchibvumirano chekutanga chekuparadzira neMobile SCANMED Systems SP. z oo kutengesa chete ProSense ™ Cryoablation System uye zvinoraswa muPoland. Mukati memwedzi gumi nembiri yekusaina chibvumirano chekutanga chekuparadzira, mapato anotarisira kupinda muchibvumirano chenguva refu chekuparadzira.
"Tiri kufara kuzivisa chibvumirano chekutanga neMobile SCANMED Systems yekuparadzira ProSense Cryoablation System yedu muPoland, tichiwedzera kusvika kwedu muEuropean Union (iyo" EU "), uko system yedu parizvino yakatenderwa pasi peEC chiratidzo. Chibvumirano ichi chinovakira padandemutande rekuparadzira ratakatangisa mugore rapfuura uye chikamu chebasa redu rekuunza tekinoroji iyi kunzvimbo dzese, ”akadaro Eyal Shamir, Chief Executive Officer weIceCure. “Sangano rezvehutano rePoland rinozivikanwa nekupa vanhu chirwere chegomarara chapamberi nekutora mishonga mitsva nehunyanzvi. Sezvo gomarara rezamu richiramba richive rimwe remhando dzegomarara pakati pevakadzi vePoland, nevakadzi makumi maviri nemazana matanhatu nemakumi mana nevaviri vakaonekwa muna 24,644.1, Poland yakabatana nekuyedza kwepasirese kwekuwedzera gomarara repazamu kuitira kuongorora uye kurapa varwere pamatanho ekutanga. Isu tinotenda mushandirapamwe uyu unokwana mushe nekwaniso yesystem yedu yekurapa varwere kare uye pasina kuvhiyiwa nekuparadza tumarara twakaipa. Pamusoro pezvo, tekinoroji yedu inopawo imwe nzira yekuvhiya yekurapa kenza mune dzimwe nhengo, kusanganisira itsvo, mapapu uye pfupa. ”
“Chikwata cheMobile SCANMED Systems chiri kuenderera mberi nekuita basa redu rekupa varapi vezvehutano vePoland mukana wehunyanzvi uye nehunyanzvi hwekurapa kubva pasi rese. Chibvumirano chanhasi chichaunza iyo ProSense Cryoablation System yekuvandudza cryoablation tekinoroji kune varwere vegomarara repazamu muPoland. Iyo ProSense Cryoablation System inokwanisa kuparadza mamota zvakachengeteka, nekukurumidza, uye pasina kurwadziwa, pasina chikonzero chekuvhiyiwa, "akadaro Marcin Weksler, Chief Executive Officer weMobile SCANMED Systems.
Pasi pemitemo yechibvumirano chekutanga chekuparadzira, Nharembozha SCANMED Systems ichave nebasa rekugadzirisa zvese zvinodiwa kutengesa ProSense Cryoablation System muPoland. Nharembozha SCANMED MaSystem anogona kungotengesa muPoland zvigadzirwa zveProSense Cryoblation System uye zvinoshandiswa zvinotengwa kubva kuIceCure. Kutevera kusaina kwechibvumirano chekutanga chekuparadzira, Nharembozha SCANMED Systems ichaisawo odha yekutanga yekutenga iyo inosvika madhora zviuru zana.